प्रभुको पुनरागमनलाई स्वागत गर्नु | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
धेरै अलमलपछि मैले बल्‍ल येशूको दोस्रो आगमनलाई स्वागत गरेँ
प्रभु येशू फर्केर आइसक्‍नुभएको छ, र यो मानिसको हृदयमा हलचल ल्याउने विषय हो। तैपनि, धेरै अलमलपछि उनले बल्‍ल प्रभुसँग मिलाप गर्न सकिन्। प्रभुलाई स्वागत गर्ने यात्रामा, उनलाई वाधा दिने प्रयास गर्ने को थियो?
20 डिसेम्बर 2021 सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
9 नोभेम्बर 2021 सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
By William, the United States अक्टोबर २०१६ मा, म संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यू योर्क आएँ, र पछि एउटा चिनियाँ मण्डलीमा प्रभु येशूको नाममा बप्तिस्मा लिए…
5 अप्रील 2021 सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
मैले परमेश्‍वरका वचनहरू र पाष्टर मुको सङ्गति सुनेँ, तिनलाई मेरो पाष्टरको बानीबेहोरासँग तुलना गरेँ, अनि यतिका वर्षहरूमा पहिलो पटक मेरो पाष्टर कति तुच्‍छ रहेछ सो कुरा थाहा पाएँ। बथानको रक्षा गर्ने बहाना बनाउँदै बाहिरी रूपमा तिनले हामीलाई अरू मण्डलीका भेलाहरूमा जान वा प्रवचन सुन्‍नबाट निषेध गरे, र उनले हाम्रो जीवन सुरक्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भनेर बारम्‍बार दाबी गर्थे। वास्तविकतामा, तिनले हाम्रो जीवनको अलिकति पनि वास्ता गर्दैनथिए। तिनलाई दशांस-भेटीबाट आफूले कति रकम प्राप्त गर्छु त्यसको बारेमा, र उसको आफ्‍नै प्रतिष्ठा र हैसियत सुरक्षित गर्ने बारेमा मात्रै मतलब थियो। तिनी साँच्‍चै नै घृणित र घातक थिए!
22 मार्च 2021 सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
प्रकाश २२:१८-१९ को साँचो अर्थ बुझिसकेपछि, मैले खुशीसाथ फर्केका प्रभुलाई स्वागत गरे
धेरै ख्रीष्टियानहरू विश्वास गर्दछन् कि परमेश्‍वरका सबै वचनहरू बाइबलमा छन्, र बाइबलमा केही पनि थप्न वा यसबाट निकाल्न सकिन्न। तर के त्यो वास्तविक मामला हो? पत्ता लगाउनको लागि पढ्नुहोस् …
21 फ्रेवुअरी 2021 सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
उनले प्रभु फर्केर आइरहनुभएको खबर सुनेकी थिइन् तर, उनले यस विषयमा खोजी र अनुसन्धान गर्दा सीसीपी(CCP)को झुटा कुराहरूले उनलाई धोका दियो, र आखिरी दिनहरूमा प्रभुको मुक्ति उनले झन्डै गुमाइन्। त्यसो भए, उनले अन्त्यमा कसरी प्रभुको पुनरागमनलाई स्वागत गर्न सकिन्?
जब प्रभु येशू फेरि आउनुहुन्छ, हामी कसरी थाहा पाउन सक्छौं?
यी दिनहरूमा विपत्तिहरू झनझन् गम्भीर हुँदै गइरहेका छन्, र त्यहाँ अनलाइनमा केही मानिसहरू छन्, जसले प्रभुको आगमन अघि नै भइसकेको छ भनेर खुल्लमखुल्ला साक्षी दिइरहेका छन्। केही मानिसहरूले यसलाई बाइबलमा पढ्छन्, “तर त्यो दिन र घडीको बारेमा न त कुनै मानिसलाई थाहा छ,” र विश्वास गर्नुहोस् कि यदि प्रभु फर्कनुभएको थियो भने त्यो कसैलाई पनि थाहा हुने थिएन। यसबारे विचार गर्नुहोस्: यदि प्रभुको आगमनको बारेमा कसैलाई थाहा थिएन भने हामी कसरी उहाँलाई स्वागत गर्न सक्छौं? “तर त्यो दिन र घडीको बारेमा न त कुनै मानिसलाई थाहा छ”? के प्रभु साँच्चै फर्कनुभएको छ वा छैन? अधिक जान्नका निम्ति पढनुहोस्।
परमेश्‍वरको नाम साँच्चै रहस्यमय छ
परमेश्‍वरले हरेक युगमा लिनुहुने नामको अर्थ हुन्छ भन्ने उहाँका वचनहरूले हामीलाई देखाउँछन्। हरेक नामले एउटा युगको, कामको एक चरणको प्रतिनिधित्व गर्दछ। उहाँको कामको आवश्यकता अनुसार परमेश्‍वरका नामहरू परिवर्तन हुन्छन्, तर उहाँका नामहरू जसरी परिवर्तन भए पनि, उहाँका स्वभाव र सार अपरिवर्तनीय छन्। परमेश्‍वर त सधैँ परमेश्‍वर नै हुनुहुन्छ। म बाइबलको शाब्दिक अर्थमा नै टाँसिने गर्थें। मेरा धारणाहरूमा अडिग रहेर, मैले प्रभु येशूको नाम कहिल्यै परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने सोच्थें। त्यसपछि मैले एउटा चलचित्र हेरें र परमेश्‍वरका नामहरूको रहस्य जानें, र थुमाका पाइलाहरू पछ्याउँनका लागि मेरा धारणाहरूलाई जान दिएँ।
मैले त्यस समयको बारेमा सोचेँ, जब मैले परमेश्‍वरको कामलाई बुझेकी थिइनँ, अन्धाधुन्ध पाष्टरको यो कुरामा विश्‍वास गरेकी थिएँ, कि प्रभु बादलमा आत्मिक स्वरूपमा आउनुहुनेछ। मैले आखिरी दिनहरूमा परमेश्‍वरले गर्नुहुने कामलाई इन्कार गर्थेँ—म धेरै मूर्ख थिएँ। परमेश्‍वरले बारम्बार सङ्गति दिन ती दाजुभाइ, दिदी-बहिनीहरूलाई प्रयोग नगर्नुभएको भए मेरा धारणहरूको कारण निश्चय म आखिरी दिनहरूको परमेश्‍वरको मुक्ति गुमाउने थिएँ—कस्तो खतरा! परमेश्‍वरको अगुवाइका निम्ति धन्यवाद दिन्छु किनकि यसले मलाई परमेश्‍वरको आवाज सुन्न, प्रभुको आगमनलाई स्वागत गर्न, अनि थुमाका पाइलाहरू पछ्याउन सहायता गर्‍यो।
केही समयपछि मैले याद गरें, कि उनी सँधै राम्रो मनस्थितिमा हुन्थिन् र उनको सम्पूर्ण आचरण पहिलेभन्दा एकदम फरक भयो। म धेरै खुसी थिएँ। समय बित्दै जाँदा म उनको मण्डलीको बारेमा उत्सुक भएँ र यसले कसैमा यति ठूलो परिवर्तन कसरी ल्याउन सक्छ भनेर अचम्ममा परेँ।
13 डिसेम्बर 2020 सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको वचनले प्रभुमाथिको हाम्रो पहिलेको विश्‍वासका समस्याहरूलाई खुलासा गर्छ। जब मैले पहिले धर्मको अभ्यास गर्थेँ, मलाई बाइबलमाथिको विश्‍वास नै परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वास हो भन्‍ने लाग्थ्यो। मैले बाइबल परमेश्‍वरभन्दा माथि छ भन्‍ने समेत विश्‍वास गर्थेँ। म बाइबल पदहरूमा, विशेष गरी उत्कृष्ट पदहरूमा टाँसिएको थिएँ। मैले साँचो रूपमा परमेश्‍वरको आवाजलाई सुनिरहेको थिइनँ, विशेष गरी प्रभुलाई स्वागत गर्ने कुरालाई। कसैले प्रभु येशू सत्यताहरू बोल्नुहुँदै, आखिरी दिनहरूको न्यायको काम गर्नुहुँदै, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको रूपमा आइसक्‍नुभयो भनी गवाही दिएको मैले सुनेँ, तर मैले यसको खोजी नै गरिनँ। मैले प्रभुलाई स्वागत गर्ने मेरो अवसर झन्डै गुमाएँ। परमेश्‍वरको उल्‍लेखनीय मार्गनिर्देशनले गर्दा मैले प्रभुलाई अभिवादन गर्न र सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरका आखिरी दिनहरूको कामलाई स्वीकार गर्न सकेँ।
12 डिसेम्बर 2020 सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
आखिरी दिनहरूमा परमेश्‍वरले इस्राएलबाट पूर्वमा आफ्नो महिमा ल्याउनुहुन्छ। सारा राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा धेरै परमेश्‍वरको विरोध गर्ने चीनमा, आफ्नो काम गर्दै र सत्य व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका सबै मानिसहरूलाई विजय गर्न र मुक्ति दिन, उहाँ देखा पर्नुभएको छ। परमेश्‍वरको सर्वशक्तिमान् क्षमता र बुद्धि यही हो। चीनमा परमेश्‍वर देखा पर्नु र उहाँले काम गर्नु गहन रूपले अर्थपूर्ण छन्। विगतमा म परमेश्‍वरको कामप्रति अपरिचित थिएँ। मेरो धारणाहरूका आधारमा, मलाई लाग्यो कि प्रभु फर्कनुभएपछि इस्राएलमा देखा पर्नुहुनेछ। मैले सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरका वचनहरू पढेपछि मात्र चीनमा परमेश्‍वर देखा पर्नु र काम गर्नुको रहस्यलाई बुझ्न सकेँ।
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरका वचनहरू पढेपछि मैले महसुस गरेँ कि मैले परमेश्‍वरको कार्यको अति महत्वपूर्ण कदम—आखिरी दिनहरूमा गरेको न्यायको कार्य छुटाएको रहेछु। हाम्रो विश्‍वासमा, हामीले परमेश्‍वरको न्यायबाट गुज्रनै पर्छ ताकि हामी शुद्ध हुन सकौं, रक्षित हुन सकौं र राज्यमा प्रवेश गर्न सकौं।
धेरै जना विश्‍वासीहरू विपत्तिहरू आउनुभन्दा पहिले परमेश्‍वरको राज्यमा लगिनेछौं भनेर प्रभु येशू बादलको सवारीमा ओर्लने घटनालाई पर्खिरहेका छन्। तर आजसम्म उनीहरूले विपत्ति बढिरहेको हेरिरहेका छन्, र प्रभु येशू बादलमा आउनुभएको छैन।